Isizinda se-Ultrasonic se-Spirulina Pigments - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kufakazelwe ukuthi kusebenza kahle kakhulu ekuhlukaniselweni kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-microalgae. Izimbali ze-Spirulina ezifana ne-phycocyanin zaziwa njenge-superfood, ezinomthelela kwizinzuzo zezempilo ngenxa yokuqukethwe kwazo okuphezulu kwama-antioxidants, amavithamini namaprotheni. Ukuze ukhiqize izithasiselo ezigxile kakhulu ezinjengo-powders kanye namathebulethi, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kumele ikhishwe ku-spirulina algae.
I-Arthrospira platensis (A. platensis) ne-Arthrospira maxima (A. maxima) ziyaziwa ngaphansi kwegama elithi spirulina. ISpirulina iyi-algae eluhlaza okotshani obuluhlaza, enothile ngama-amino acid kanye nama-antioxidants. Ngomthwalo omningi wezakhi ezinjengamaprotheni, ama-enzyme, amaminerali, namavithamini A, K, B12, i-iron ne-manganese, ahlukaniswe njenge-superfood. I-algae genus Arthrospira inokuqukethwe okuphakeme kakhulu kwamaprotheni. Okuqukethwe ngamaprotheni kusuka ku-53 kuya ku-68% ngesisindo esomile futhi kunikeza inani eliphelele lawo wonke ama-amino acid abalulekile. Ngaphezu kwalokho i-Arthrospira inamanani amaningi ama-polyunsaturated fatty acids (PUFA), okuyi-approx. I-1.5 kuye ku-2% yokuqukethwe okuphelele kwe-lipid ka-5 kuye ku-6%. Lama-PUFA aqukethe i-γ-Linolenic acid (GLA), i-Omega-6 Fatty acid ebalulekile. Ezinye izinto ezihlanganiswa yi-Arthrospira zihlanganisa amavithamini, amaminerali kanye nemibala ethambile.
Qaphela: Ngokwesayensi, uSpirulina platensis (S. platensis) noSpirulina maxima (S. maxima) babizwa ngokufanele ngokuthi i-Arthrospira platensis (A. platensis) ne-Arthrospira maxima (A. maxima). Zombili lezi zinhlobo zazikade zihlukaniswa kuhlobo lwe-Spirulina futhi kuze kube namuhla zaziwa kakhulu ngegama le-spirulina. Yize sekwethulwa i-genera ehlukene ye-Arthrospira ne-Spirulina manje sekuyamukelwa ngokuvamile, igama elithi spirulina livame ukusetshenziswa njengegama lesambulela.
I-Ultrasonic yochungechunge UP400St
Ama-ultrasonic cell disruptors (aphinde abizwa ngokuthi ama-ultrasonic ultrasonic) aziwa ngokukwazi kwabo ukuvula amaseli ukuze akhulule impahla ye-intracellular. Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasound ehlanganiswa abe ngamanzi, i-cavitation ye-acoustic ivela. Amandla okucabangela ukuphazamisa izindonga zezingcingo futhi ethuthukisa ukudluliselwa kwamandla ukuze izinhlanganisela ezibhekiswe kuzo zihanjiswe kusuka esitokisini zibe yiketshezi.
Prabuthas et al. (2011) asungule le protocol yokukhishwa elandelayo ukuze kutholakale ikhwalithi ephezulu ye-phycocyanin ekhishwe: Ukukhishwa kwe-Phycocyanin kwahlolwa ngokuya nge-phycocyanin okuhlushwa kusetshenziswa amanzi ahlanekezelwe nesixazululo se-1% seCaCl2. I-algae spirulina isetshenziswa ngendlela eyomile ngoba i-biomass emanzi isetshenziswa ngokushesha ngamagciwane futhi iqala ukonakala ngenxa yokwakheka kwayo okunomsoco. Ngakho-ke ukugwema lezi zinkinga, kunconywa ukusetshenziswa kwe-algae biomass eyomile. Ukukhishwa kwenziwa ngokuxuba i-0,1g ye-biomass eyomisiwe nenani le-solvent, i-sonication yenziwa isikhathi kanye ne-amplitude ngokusho komklamo wokuhlola. Ukumiswa kwesampula kwenziwa ngokuthi kusetshenziswe ukuphazanyiswa kweseli kwe-Hielscher's UP50H, kwalandelwa ukukhipha imizuzu eyi-15 ngehora le-13500rpm kusetshenziswa isiqandisi sefriji. I-phycocyanin kanye nokuqukethwe kwamaprotheni ngesikhathi sokukhishwa ngezinsimbi ezihlukile kwakuyicalcium chloride kanye namanzi aphalalisiwe aphenywayo.
Isamba esiphezulu se-phycocyanin, i-0.3116mg / ml satholakala kwisisombululo se-calcium chloride salandelwa ngu-0,099mg / ml emanzini afakwe emanzini. Inani eliphakeme lamaprotheni, ama-63.63% atholakala ku-solvent yamanzi e-solvent no-54.69% kusisombululo se-calcium chloride. Ngakho-ke isixazululo seCaCl2 satholakala kokuxazululwa okungcono kakhulu kokukhishwa kwe-phycocyanin ngosizo lwe-ultrasound.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonic Extractors kwe-Spirulina Khipha
I-Hielscher ngumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi uma kuziwa ekususeni okunamandla, okuthembekile kwe-ultrasonic yama-biioass kusuka ezitshalweni naku-phyto biomass. Zonke izingcwecwe ze-ultrasonic zingaqhutshwa ngo-24/7 futhi zilungele ukukhiqizwa okuthengiswayo kokukhishwa kokudla. Uhla lomkhiqizo wethu luhlanganisa ukubukwa okugcwele kusuka kuma-biodisruptors amancane aphethwe ngesandla kuya kuma-ultrasonicators endiza nezinhlelo ze-ultrasonic zezimboni. Izesekeli ezahlukahlukene ezinjengama-sonotrodes ahlukene kanye nama-flow cell reactors avumela ukuguqulwa okuhle kwezidingo zenqubo yakho. Zonke izinqubo zokusebenzisa ze-Hielscher ze-Hielscher ziqinile, kulula ukuzisebenzisa futhi zenzelwe ubungani bomsebenzisi. Ama-ultrasonicators ethu alawulwa wedijithali eza nekhadi le-SD elakhelwe ngaphakathi lokuzivumelanisa ngokuzenzakalelayo nedatha ye-sonication.
Okuhlangenwe nakho kwesikhathi eside ku-sonication
Ukuvikelwa okumanzi kuvikelwe
Isevisi yamakhasimende enhle kakhulu
ukuqeqeshwa & isevisi yokufaka
Imishini ye-ultrasonic eyenziwe ngokwezifiso
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kahle baqinisekisa ukuhlinzekwa kwamakhasimende aphakeme kanye nokubonisana nokuqeqeshelwa kwezobuchwepheshe.
Thintana nathi namuhla! Siyajabula ukukuncoma udokotela osebenza kakhulu we-ultrasonic wesicelo sakho.
I-ultra-power ultrasonic extractors kusukela ebhayisini kuya ku-pilot kanye nesilinganiso sezimboni.
Bachchhav MB, Kulkarni MV, Ingale AG (2017): Isizinda esiphumelelayo se-phycocyanin nge-ultrasonication nokuhlukaniswa usebenzisa 'ukushukela ngaphandle'. I-Phykos 47 (2): 19-24 (2017).
Prabuthas P., Majumdar S., Srivastav PP, Mishra HN (2011): Ukumiswa kwendlela esheshayo neyokonga ye-neutraceuticals extraction kusuka ku-algae. Umagazini weMikhiqizo egcinwe kanye noPhando lokuPhumela emva kokuvuna Vol. 2 (5) k. 93 – 96, Meyi 2011.
ISpirulina iluhlobo lwe-cyanobacteria (eyaziwa nangokuthi i-cyanophyta) okuyigilamu yamagciwane athola amandla awo ngokusebenzisa i-photosynthesis. Yiwo kuphela ama-prokaryotes wezithombe okwazi ukukhiqiza umoya-mpilo. Igama elithi cyanobacteria livela kumbala wamagciwane (ngesiGreek: κυανός, translate. Kyanós, lit. blue). Ngenxa yombala wabo babizwa nangokuthi i-algae eluhlaza okotshani, yize igama elithi i-algae ekusetshenzisweni kwanamuhla livunyelwe kuma-eukaryotes. I-Spirulina platensis (S. platensis) yi-multifilamentous prokaryotic cyanobacterium engakhula kalula njenge-monoculture emachibini avulekile noma kuma-bioreactors avaliwe. I-C-phycocyanin (C-PC) yiyona phycobiliprotein enkulu ese-spirulina.
I-Spirulina iyisithako esidla ukudla esidumile esivela ku-biomass ye-cyanobacteria yasolwandle (i-blue-green algae). Izinhlobo ezimbili ze-spirulina ezisetshenziselwa ukulungiselela amaprotheni we-vegan kanye nama-pigment supplement yi-Arthrospira platensis ne-Arthrospira maxima. Ukukhishwa okukhishwe kulezi zinkampani ezincane kucebile kuma-antioxidants, ama-amino acids namavithamini. Ngakho-ke, i-powder yocwecwe eluhlaza okwesibhakabhaka iyongezwa kumajusi, i-smoothies, i-shakes and iziphuzo futhi ibanika umbala omuhle okwesibhakabhaka. Ngaphandle kwalokho, ukukhishwa kwe-spirulina kungadliwa ngesimo sethebhulethi.
I-Phycocyanin allophycocyanin ne-phycoerythrin ziyi-pigment-protein complexes ezivela emndenini wokuvuna ukuvuna i-phycobiliprotein, eyaziwa ngombala wabo obuluhlaza obuluhlaza. I-Phycocyanin iyi-pigmentary accessory ku-chlorophyll. Njengoba zonke izinhlobo ze-phycobiliprotein zingencibilika kwamanzi, azikho ngaphakathi kwendwangu, esikhundleni salokhu i-phycobiliprotein iboshwe njengama-aggregates (okuthiwa i-phycobilisomes) esithombeni segesi.
Isizinda se-Ultrasonic kanye nokuphazamiseka kweseli
I-Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) isetshenziselwa ukukhulula futhi ihlukanise ama-bioactive compounds kusuka ku-phyto impahla kanye nezicubu.
Ngezinqubo zokukhipha isizinda se-ultrasonic, amagagasi amakhulu e-ultrasound ahlanganiswa abe yisilinganiso lapho amagagasi efaka khona ukuguquguquka nokwanda. Ngesikhathi semijikelezo yokucindezelwa / yokwanda, kudalwa amabhuleki we-vacuum akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana aze angakwazi ukubamba amandla amaningi ukuze afaka ngobudlova. I-bubble implosion ikhiqiza isimo esinamandla kakhulu namazinga okushisa endawo afinyelela lapho afinyelela ku-5000K, umehluko wengcindezi we-1000atm, ukushisa kanye namazinga wokupholisa ngenhla kwe-1010 K / s kanye namajethi awuketshezi anezikhala ezingama-280m / s. Le nto yaziwa ngokuthi i-acoustic cavitation.